Talenta Dimy - Wikipedia
Ny Talenta Dimy dia tetik'asa manokana izay anentanana ny olona resilahatry ny Filazantsaran'i Jesosy mba hampiasa ny talentany hofampandrosoana ny mpiara-belona aminy. Maro samy hafa ny fanomezana avy amin'Andriamanitra izay efa eo ampelatanantsika nefa mbola tsy fantantsika ny fananantsika azy. Noho izany, fantaro dia ampiasao mba hitombo avo roa heny.
Hatreto ny asa izay atrehin'ny Talenta Dimy dia ny famoahana ny kapila rakin-tsarin'ny KTLM FIADANANA ANDRANOFASIKA MANAKARA-MADAGASCAR sy famoahana ny kapila Afon-dagnaka, tokelaka amin'ny fitenim-paritra Atsimo Atsinanana, miaraka amin'ny FSFLM ANDRANOFASIKA MANAKARA. Ny vola voangona dia ataon'ireo tanora ireo hofamitana ny Tranovatom-piangonana. Voizina ao anatin'izany rehetra izany ny fampiasana ny talenta izay misy eo amin'ny tsirairay.
Samy raisinay eto amin'ny Tetik'asa Talenta Dimy avokoa ireo fanampiana avy aminareo toy ny torohevitra, tarin-kevitra, fitaovana, vola, mba hahafahana mampandroso ny hafa izay mila tohana avy amintsika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Talenta_Dimy&oldid=48419"
Voaova farany tamin'ny 16 Martsa 2010 amin'ny 16:58 ity pejy ity.